Vacos Baby Monitor, uhlalutyo kunye nokusebenza | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/08/2021 23:50 | Reviews
Sibuyele kwiGadget yeActualidad nge uphononongo losaphoNgokukodwa kwiintsapho ezineentsana. Itekhnoloji yeza kubomi bethu ukwenza ukuba kube lula kuthi. KUNYE kubazali abaneentsana endlwini, naluphi na uncedo lincinci. Namhlanje sithetha malunga Ukubeka iliso kwiintsana ezingenanto, ikhamera yeprimiyamu ukwenzela ukuba ungaphulukani neenkcukacha zincinci yendlu.
Kukho amathuba amaninzi emarikeni xa ujonge usana lokujonga ikhamera. Namhlanje Sikuxelela konke malunga nesindululo seVosos. Ikhamera yokhuseleko epheleleyo lawula iintsana ngevidiyo, iaudiyo, umbono wasebusuku nokunye okuninzi ngaphezu kwabanye banako ukunikela.
1 I-Vacos Baby Monitor, umntwana wakho ukhuselekile
2 Iibhokisi ze-Unboxing Vacos Monitor
3 Ikhamera kunye noyilo lwesikrini
4 Iimpawu zokuGada iiMveku zabantwana
4.1 Yonke into iphantsi kolawulo "
5 Iinkonzo kunye neengxaki ze-Vacos Baby Monitor
I-Vacos Baby Monitor, umntwana wakho ukhuselekile
Ukujonga imbonakalo yomzimba, I-Vacos Baby Monitor camera, yiyo ngokufanayo nezinye iikhamera zokhuseleko ukuba sikwazi ukubonisa. Iikhamera ezenzelwe olunye uhlobo lokujonga, njengamakhaya ethu okanye amashishini. Nangona ukuba sijonga Kwizibonelelo enazo, sifumana umahluko obalulekileyo. Ngaba le iliso lomntwana ubulifuna? Yibambe Ukubeka iliso kwiintsana ezingenanto kwiwebhusayithi esemthethweni ngexabiso elifanelekileyo.
Singatsho ukuba yahluke ikakhulu kuleyo siyifumanayo ividiyo evaliweyo yesekethe kuba sinesidlulisi sevidiyo, ikhamera, kunye nesamkeli somqondiso, njengescreen, apho bakhoyo ulawulo oluyimfuneko kuqwalaselo kunye nokusetyenziswa kwalo. I-100% yesekethe ekhuselekileyo kwaye ikhululekile kwii-hacks ezinokwenzeka.
Iibhokisi ze-Unboxing Vacos Monitor
Ngoku lixesha lokujonga ngaphakathi kwebhokisi yale "kit" yokujonga umntwana. Njengoko sele sibonile, sifumana izinto ezimbini eziphambili ezinje ikhamera yevidiyo uqobo, ezimhlophe kwaye zenziwe ngeplastikhi ngokugqitywa kwe-gloss. Kwaye i esweni ngescreen kunye namaqhosha olawulo.
Sinezinye izinto ezisisiseko zokusetyenziswa ezinje nge zixhobo. Sinentambo yangoku yekhamera, kunye nenye ukutshaja ibhetri esweni. Zombini nge Ifomathi yohlobo C lwe-USB. Kwakhona iiadaptha zamandla ezimbini ngentambo nganye.
Myalelo apha wakho Ukubeka iliso kwiintsana ezingenanto ngexabiso elifanelekileyo kwiwebhusayithi esemthethweni
Okokugqibela, sifumana isixhobo esiza kusetyenziswa ukukrola ikhamera yevidiyo eludongeni ejolise apho ilungele thina. Abancinci iinkcukacha zokuhombisa ezenza ikhamera ibonakale njengomntwana esinokubeka phezu kwayo; izibini ezibini ze iimpondo ezipinki nezimthubi. Kwaye njengesiqhelo, a Isikhokelo esincinci somsebenzisi kunye namaxwebhu ewaranti yemveliso.
Ikhamera kunye noyilo lwesikrini
Njengoko sele sithethile, ikhamera inokunyangwa ngokugqibeleleyo kwenye yeekhamera zokujonga esibe nakho ukuvavanya. Inefayile ye- Isiseko se-cylindrical apho elinye icandelo elijikeleziweyo lihleli khona apho ilensi idityanisiwe. Kodwa nangoku, sifumanisa izinto ezizahlulahlula, njenge-eriyali, okanye ukubanakho kokwenza ubuwena kunye nezinye izinto zokuhombisa ezifakwe ebhokisini.
Akhawunti imakrofoni kunye nesithethi, ke ixhotyisiwe isandi esine-bi. Ngaphandle kwamathandabuzo kuluncedo olukhulu ukukwazi ukunxibelelana nomntwana ngalo lonke ixesha ukuba uvukile okanye ukuba sifuna ukuthetha naye kwisandisi-lizwi ukuze simzolise. Iilensi zibonisa isisombululo se-HD 720P kwaye nge umbono obalaseleyo ebusuku ehambisa imifanekiso ebukhali nakuphi na ukukhanya, okanye engekho kwaphela.
El Iliso elawula ikhamera ine Isikrini se-LCD esingu-5 intshi. Ngaphambili, a la derecha kwesikrini, sifumana ifayile ye- amaqhosha asemzimbeni ezisebenza ukulawula ukusetyenziswa kwazo.
Kulo ngasemvakunye ne iinkophe yintoni esebenzayo ukuze simphakamise, sifumanisa I-eriyali ukuze umqondiso ukhutshwe kwaye ufumaneke ngokucacileyo okungcono. Emazantsi une imemori khadi ukuya kuthi ga kwi-256 MB yememori apho sinokugcina khona urekhodo.
Iimpawu zokuGada iiMveku zabantwana
Lixesha lokuba ndikuxelele ngezona zizathu ziphambili ezenza ukuba le Vacos Baby Monitor ibe lolona khetho lufanelekileyo kwimarike yokuthatha isigqibo ngalo. Njengoko besesitshilo, i uyilo, nangona ifana naleyo yekhamera "yokujonga" eqhelekileyo, kunjalo enomtsalane, yanamhlanje kwaye ayizukungqubana kuyo nayiphi na indawo.
Enkosi kwimenyu yokubeka iliso ngokulula sinokufumana lonke ulawulo oluyimfuneko ukuze sifumane okuninzi ekusebenziseni kwayo. Kunye iqhosha ngqosinako yenza okanye ukhubaze ikhamera, okanye imakrofoni ukuthetha nosana okanye ukwazi ukuva ukuba umntwana uyakhala. Ngamaqhosha akumbindi wendawo Singayijikeleza ikhamera ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-355 kwaye siyishukumise ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-55 zokuthambeka. Sinokusondeza umfanekiso kunye neqhosha eliphambili nge 1,5X isondeza ukuya 2X.
Akunakwenzeka ukuba ufumane isiphelo esingavumelekanga ukuba i-Vacos Baby Monitor yethu ingabhalisi. Ngokubeka iliso Singadibanisa ukuya kwiikhamera ezi-4 ezahlukeneyo esinokuthi silawule ngendlela efanayo. Yiyo loo nto siza kuba nemifanekiso yekona nganye yegumbi lokulala kwigumbi apho sifuna ukuyifaka khona. Lonke ukhuseleko olukhangelayo kwisixhobo, kwaye oko ungathenga ngoku kwiwebhusayithi yayo esemthethweni.
Yonke into iphantsi kolawulo "
Iimvakalelo Ikhamera enayo yenze igqibelele ngakumbi kwaye isebenze 100% ukusinika amava apheleleyo. Sinefayile ye- isivamvo sokuhambahamba eziza kwenza ukuba imonitha ivuke kwaye sijonge ukuba ingaba umntwana uvukile na okanye uyahamba nje xa ulele. Ngendlela enye, isivamvo sesandi iya kubangela ikhamera kwaye ijonge ukuba umntwana uyakhala.
Enye ye Abenzi boluvo abenza i-Vacos Baby Monitor yahluke kwezinye iindlela bubushushu. Ikhamera iyakwazi ukusinika ulwazi malunga nobushushu begumbi. Ngale ndlela siya kwazi ngendlela elula ukuba kunyanzelekile ukuba sibeke ubushushu okanye ngokuchaseneyo, ukuba iqondo lobushushu liphezulu.
I-Vacos Baby Monitor inefayile ye- ithuba lokurekhoda imifanekiso. Ayisixhasi nje kuphela usasazo ngqoUkuba sifuna, sinokwazisa Ikhadi le-Micro SD ukuya kuthi ga kwi-256MB yokugcina kwividiyo. Siza kuba nomqondiso ocacileyo nongasikwanga nge umgama ukuya kwiimitha ezingama-300 ukusuka kwikhamera ukuya ekubekweni esweni, sinokuhambahamba endlwini ngaphandle kwengxaki.
Inkcukacha ebalulekileyo kukuba iiVos Baby Monitor awuyidingi i-smartphone, ke ngoko akuyi kufuneka sifake usetyenziso. Akukho nxibelelwano lwe-intanethi oluyimfuneko Ukusetyenziswa, isiginali ekhutshwe yikhamera ifunyanwa kuphela liliso ngokwaso. Ngaphandle kweeNkqubo okanye i-intanethi, imifanekiso yethu ikhululekile kubagculeli.
Iinkonzo kunye neengxaki ze-Vacos Baby Monitor
El 5 intshi ubungakanani bekhusi kunye nesisombululo se-720p
Ukulula de sebenzisa Ukusuka kumzuzu wokuqala kunye nokungafaniyo kokhetho
Izixhobo, isandi, ukuhamba kunye nobushushu
Ngaphandle kwe-intanethi ngamanye amaxesha uyilo lwendlu ungabeka umqobo othile
Ixabiso ngaphezulu komndilili
Ukubeka iliso kwiintsana ezingenanto
Ithunyelwe nge: 1 Septemba ye-2021
Utshintsho lokugqibela: 31 Agasti 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Vacos Baby Monitor, uhlalutyo kunye nokusebenza